Maareeyaha Guud ee Wakaaladda Dhismaha Soomaaliyeed Oo Kormeeray Xarunta Gaheyr ee Jaamacadda Ummadda – Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Maareeyaha Guud ee Wakaaladda Dhismaha…
Maareeyaha Guud ee Wakaaladda Dhismaha Soomaaliyeed Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa maanta booqasho xog uruurin ah ku tegay xaruunta wayn ee Gaheyr ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS).
Maareeyuhu wuxuu u kuur galay hawlaha dib-u-dhiska iyo dayactirka ee Jaamacadda Ummaddu ka sameysay Xaruunta Gaheyr oo hadda ay saldhig u ah 7 kulliyadood oo ay dhigtaan 2,500 arday.
Jaamacaddu waxa ay hadda dhamaystirtay laba dhismo oo ka kooban 17 fasal iyo xafiisyadooda kuwaas oo loo dhisay kulliyadaha Sayniska qaybaha Cilmiga Badda (Marine Science) iyo Jolojiyada (Geology) oo hadda ay dhigtaan 200 oo arday.
Dayactirka waxaa lagu hirgeliyey si isku tashi ah qarashka ku baxayna waxaa laga qaaday ardayda, waalidiintooda iyo maamulka Jaamacadda.
Sareeye Guud Bashiir wuxuu aad u bogaadiyey in JUS ay si isku tashi ah u dayactiratay xaruumaheeda.
Dhawaan ayaa wakaaladda dhismaha iyo JUS waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah (MOU) oo ku saabsan sidii labada hay’adood isaga kaashan lahaayeen dib-u-dhiska dalka iyo fidinta aqoonta Injineeriyadda iyo Teknolojiyada taas oo dalku baahi wayn u qabo.
Sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in kulliyadda Injineeriyadda JUS iyo wakaaladdu ay wada shaqayn dhaw ka yeeshaan si ay isaga kaashadaan dib-u-dhiska xifadda iyo xirfadleeyda dhismaha iyo Injineeriyadda.
FG : Ilaa iyo hada Ma jiro wax dhismo ama dayactir ah oo ay WAKAALADDA HORUMARINTA DHISMAHA SOOMAALIYEED ka wado xarumaha Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Categories: News, SliderBy snuedu February 19, 2020 Leave a comment
PreviousPrevious post:Campus lifeNextNext post:Ololaha nadaafadda Jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay xarunta Shabeelle